page Komputermen 1
AdBlock Plus - isandiso yokuvimbela izikhangiso Firefox
Mozilla Firefox With mkhuba banner kanye pop-up (esenziwe ngendlela iwindi pop-up) uphawu lokukhangisa ngokoqobo wonke umuntu osebenzisa i-Internet.
Uhlolojikelele futhi Isethaphu Netgear JNR3210
A bit of router vneshnosti- limane ekhethekile akuhlukile eziningi kwezinye (njengoba besho ibhokisi domohozyayki- nge-antenna ezimbili).
kanjani ukufaka Windows XP? Umholi nge izithombe
Ukukhipha ngesibalo sabantu sesisidala kule minyaka eyishumi edlule step PBX
inethiwekhi I ukuvela nokwanda ubuchwepheshe obusha emkhakheni ngocingo corporate nobuchwepheshe bezokuxhumana uye waholela ekusungulweni hybrid IP-PBX kanye ngokugcwele IP-PBX.
3D-izibuko production Samsung
Gadgets Muva Samsung uye wasungula esiyingqayizivele 3D-izibuko nge wireless ukushaja umsebenzi, ukusebenza ngalo kusekelwe isimiso sokuzibusa kwamazwe resonance magnetic.
Indlela ukukhetha laptop
5 Ukuwa ngokushesha amanani ama-laptop ngenxa ukuncintisana yabo ungaphumeleli kakhulu esizukulwaneni esisha amaphilisi, wahamba kuphela ukuze kuzuze abathengi abajwayelekile.
Yiziphi izinkinga nge-Skype on Android kungaba?
Skype A Uhlelo unique Skype namuhla for abanye abantu kwaba ithuba kuphela zokuxhumana mahhala nabangani kanye nabathandekayo hhayi kuphela ngokusebenzisa amavidyo, kodwa ngosizo imiyalezo futhi ucingo landlines.
Indawo iqoqo yangasese zokwakha kanye lover ulwazi kanye resource zemfundo. Lonke ulwazi atholakala emithonjeni yomphakathi. Abaphathi asisebenzi ubunikazi materials esetshenziswa. Wonke amalungelo bangabanye zabanikazi